🥇 ▷ Xiaomi POCOPHONE F1 ee raad raacyada OnePlus 6: Qiimaha saamiga qaaska ah oo qayaxan? (fiidiyow) ✅
Xiaomi POCOPHONE F1 ee raad raacyada OnePlus 6: Qiimaha saamiga qaaska ah oo qayaxan? (fiidiyow)
Toddobaadyo yar gudahood hadda waxaan ka wada hadalnay magaca cusub ee qarsoon ee Xiaomi, oo la yiraahdo POCOPHONE, kaas oo noloshooda siin doona taxane cusub oo casri ah oo casri ah oo lagu meelayn doono iyada oo ay weheliso heerka caadiga ah ee Mi iyo Redmi. Markii hore, Thanks to magaca aan lala socodsiineynin annaga oo ah Talyaani, si miyir leh ayaa naloo keenay inaan ka fikirno aalado-dhaqaale, laakiin hadda waxay u muuqataa inay iska caddahay inay noqon doonto ilaa xad ka soo horjeedda.
Taleefoonnada ugu horreeya ee taxanaha cusub waa inay soo wacaan POCOPHONE F1 wuxuuna kusii socdaa inuu ku sii jeedo bilowga rasmiga ah. Sidii horeyba looga ogaa bilooyinkii ugu horreeyay, aaladda ayaa la bixin doonaa sidoo kale suuqa Yurub iyo yaa haddii aan Roland Quandt daaha ka qaadi kareynin wax go’an oo ka sarreeya dhammaan qiimaha daadashada ee Bariga Yurub?
AKHRISO: Miyaad ka quustay Xiaomi Mi Max 3? Mi Max 3 Pro ayaa waliba imaan doona
Caanka ah baxsiga Waxay ka hadleysaa taleefan casri ah oo ku rakiban SoC Qualcomm Snapdragon 845 iyo bandhigyo laga keenay 5.99 “ – laga yaabee in lagu qalabeeyo feejignaan, male awaal ah oo uu horay u dhigay fiidiyowga dhamaadka maqaalku – qaraarka HD buuxa +. Illaa iyo hadda wax aan naxdin leh leh, haddii aysan ahayn Rabbiga qiimo, taas oo heerka sarrifka ay u dhigmi karto 420 € ku saabsan nooca uu ka yimid 6/64 GB waa at 460 € taas waxaa laga keenay 6/128 GB. Si kastaba ha noqotee, waxaan ku tilmaameynaa in kuwanu yihiin kuwa aan laga beddelin qiimaha Shiinaha, laakiin ay ku jiraan liisaska loo bixiyay Bariga Yurub.
Sidaa darteed waxaa jira fursado aad u fiican oo inala leh, POCOPHONE F1 oo kaliya heli doona dhowr yuro oo dheeri ah, ayagoo dalbanaayo sida tartan culus qaybta nooca casriga ah ee casrigaqiimo aad u wanaagsan oo lacag ah, oo hada u aragta OnePlus 6 inay xukumaan, oo ay ku xigaan sharaf aad u fiican 10. Imisa idinka mid ah ayaa rajeynayay inaad gacmahaaga ku hesho taleefanka casriga ah sidan oo kale?
Xiaomi Pocophone F1 waxay umuuqataa inay noqon doonto mid rakhiis ah … waxay ku qornaa bariga Euroland ~ ~ 420 Euro (6 / 64GB) iyo ~ 460 Euro (6 / 128GB) (qiimaha ayaa la badalay). Hadday runti leedahay SDM845 in qiimeyntaasi runtii ay cajiib ku noqon lahayd qalab leh shaashad 5.99in 2160x1080px.
– Roland Quandt (@rquandt) Luulyo 23, 2018